नियमित पत्रकार सम्मेलन लाईभ वैशाख ०३ (Live)
३ कार्तिक २०७८, बुधवार
जनता भ्वाइस calendar_today ३ बैशाख २०७७, 10:41 am
डोटेलको –‘‘कृष्ण अब तिमी आउ…’महामारी लक्षित गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
कृष्ण राई बिन्दासको “मकै पिस्ने घट्ट” (भिडियो सहित)
१ सय ४० विद्यार्थीका लागि ८ करोड भन्दा बढिको भवन…
धेरैजसाे कम्युनिष्ट नेताहरुमा अनुशासन र आचरण हरायाे : उपप्रमुख श्रेष्ठ…
रामेछापेली नवगायक श्रेष्ठको पिरतिको गुन्द्री सार्वजनिक [भिडियोसहित]
रामेछापमा लिंगेपिङ हाल्ने र खेल्ने परम्परा विस्तारै हराउदै गएको छ । केहि वर्ष अघिसम्म प्रत्येक टोल टोलमा लिंगेपिङ हाल्ने र खेल्ने चलन थियो । टीकाको दिन मान्यजनबाट टीका जमरा लगाएपछि एक पटक पिङ खेल्नै पर्छ र धर्ती छोड्न पर्छ भन्ने मान्यता थियो । दशैँ भन्ने वित्तिकै धेरैलाई गाउँघरमा हालिने लिङ्गेपिङकोे याद आउथ्यो र आउँछ । एक समय दसैं तिहारमा ग्रामिण भेगमा लिंगेपिङ मुख्य आकर्षण हुन्थ्यो । बिस्तारै मनोरञ्जनका अन्य साधन पनि गाउँ भित्रिन थालेपछि गाउँघरबाट पिङ लोप हुन थालेको छ ।
दसैँ नेपाली हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड हो । दसैँलाई उत्तर वैदिक कालदेखि नै मनाइन थालेको दृष्टांश रामायणमा आदर्श पुरुष रामचन्द्रले उनकी भार्या सीता रावणबाट हरण भएर युद्धको तयारीमा गरेको देवी पूजनोत्सवले समेत इङ्गित गर्दछ ।
सोकुरा पत्ता लगाएर युद्धको तयारी गर्दा आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा (घटस्थापना) देखि नवमीसम्म दुर्गा माताको भक्तिका साथ ९ दिनसम्म पूजार्चना गरी दसौं दिनमा पूजा समापन गरेर देवीको प्रसादस्वरूप टीकाजमरा ग्रहण गरी रावण युद्धमा विजय हासिल गरेको सन्दर्भमा विजयादशमी भनेर मनाउन थालिएको हो ।
हजारौं वर्षसम्म दसैँलाई सम्पूर्ण हिन्दूहरूको महान् चाड भनेर मनाइए पनि यो सबै हिन्दूहरूको महान् चाड भने होइन । खानपिन मात्र गर्ने तर टीका नगलाउने हिन्दूहरू नेपालभित्रै धेरै भेटिन्छन् ।
हिन्दू धर्ममा धेरै सम्प्रदायहरु छन् । कृष्णलाई मान्ने कृष्ण प्रणामी, विष्णुलाई मान्ने वैष्णव, शिवलाई मान्ने शैव र शक्तिलाई मान्ने शाक्तहरू हुन् । शाक्तलाई मान्ने भएकैले हामी शक्तिपूजारी हौं ।
यसरी कृष्ण, विष्णु, महेश र देवी सबैलाई मान्नेचाहिँ सनातनी भक्तहरु हुन् ।
९ करोड ३२ लाख ५० हजारको लागतमा सो अस्पताल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाई (भवन) रामेछापमार्फत बन्न लागेको हो ।
२०७९ मंसिर ३० गते निर्माणका सम्पन्न गर्ने गरी गाल्वा/लाल शुभ मेन्द्रो जेभी काठमाडौँले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ ।
शिलान्यासको कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले आजको दिन आफु जिन्दगिको सबै भन्दा खुसी भएको बताएका छन् । अब यो अस्पताल बनेपछि रामेछापवासीले उपचारका लागि राजधानी धाउन नपर्ने उनको ठहर छ ।
जनता भ्वाइस calendar_today ७ भाद्र २०७८, 1:42 am
साहित्यकार मालिका केशरीको बौद्ध दर्शनमा आधारित आख्यान ‘दुङाल’को आज राजधानीमा सार्वजनिकीकरण भएको छ । उपन्यासको इतिहासकार एवं हिमाली अध्ययनका ज्ञाता डा. रमेश ढुंगेल, मानवअधिकारवादी सुदीप पाठक, पूर्वसचिव एवं साहित्यकार डा. सुधा शर्मा र आख्यानकार मालिका केशरीले संयुक्त रुपमा विमोचन गरे ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी पाठकले उपन्यासले शरणार्थीको मानवअधिकार, न्याय र आत्मसम्मानका कुरा उठाएकोे बताए । उनले भने,– ‘उपन्यास पढ्दा पाठकलाई हरेक घटनामा आफू पनि सँगै रहेको भान हुन्छ । आप्रवासन या शरणार्थी हुनु रहर नभएर बाध्यता भएको कुरा उपन्यासले राम्ररी स्थापित गरेको छ । मानवअधिकारका दृष्टिले ‘दुङाल’ पाठकलाई रोचक र घोचक कोसेली हो ।’ यसले तिब्बती समुदायको समस्यामात्र नउठाएर उनीहरुको न्याय र आत्मसम्मानको वातावरण बनाउनका लागि कर्तव्यबोध गराएको उनले औंल्याए ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. शर्माले पुरुष लेखक भएर पनि महिलाका भावनाको गहिराइ छोएर शरणार्थीको कथा भन्न सक्नु उपन्यासको सफलता भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्,– ‘शरणार्थी केटी कार्चुङको कथा उनकै आँखाबाट भनिएको छ । लेखक संवेदनशील हुने हो भने महिला पात्रले न्याय पाउने रहेछन् । अरु लेखक पनि मालिका केशरीजस्तो हुने हो भने मानवअधिकारमा पनि सुधार हुने रहेछ । यो उपन्यास समाजका यथार्थलाई चित्रण गर्न सफल छ । यो मननीय, संग्रहणीय र पठनीय छ ।’ तिब्बती शरणार्थीको परिवेशको उपन्यास भए पनि यसले विश्वभरि नै विस्थापन र शरणार्थीको पीडा भोगेका मानिसको पक्षमा बोलेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै इतिहासकार डा. ढुंगेलले ‘दुङाल’ले लगभग हराउन थालेको र बिर्सन लागेको शरणार्थी समस्यालाई साहित्यमार्फत उजागर गरेको बताए । उनले भने,– ‘साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लो समय शरणार्थी समस्या बिर्सन लागिसकेका थियौं । उनीहरुका दुःख, पीर, वेदना र उकुसमुकुसलाई दुङालले अभिव्यक्त गरेको छ । आँखैले देखेजस्तो छ हरेक घटना । एक बसाइमा पढिसकिन्छ । अन्तिम अध्यायमा नपुगेसम्म पाठकलाई तानिरहन्छ ।’ उपन्यासले दुई भिन्न संस्कृतिबीचको अन्तरद्वन्द्व देखाउँदै ै आधुनिकता र परम्पराको समन्वयको खाँचो औंल्याएको बताए ।
कार्यक्रममा आख्यानकार मालिका केशरीले आफ्नो बाल्यकालदेखिको शरणार्थी शिविरसँगको सामीप्यताका कारण ‘दुङाल’ जन्मेको बताए । ‘देशमा बस्न नसकेपछि जीवन खोज्दै यहाँ आइपुगेका शरणार्थीप्रति हामीले गरेको व्यवहार सही छन् त भन्ने प्रश्नले घचघचाएपछि उपन्यास नलेखी बस्न सकिनँ’– उनले भने ।
मालिका केशरीका यसअघि बौद्ध दर्शनमा आधारित उपन्यास ‘पुनरुत्थान’ र ‘सुवर्णलता’ प्रकाशित छन् । सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको ‘दुङाल’ उनको तेस्रो उपन्यास हो । उनी बौद्ध दर्शनका अध्येता हुन् ।
जनता भ्वाइस calendar_today २ भाद्र २०७८, 10:29 am
२ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल ‘नेकपा एमाले समाजवादी’ बनाउने निर्णय गरेका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मात्र संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्